Pazuva rino Vicente Aleixandre akashaya | Zvazvino Zvinyorwa
Pazuva rakafanana nanhasi, kunyanya Zvita 14, 1984, Vicente Aleixandre akafa muMadrid. Aive mumwe weanonyanya kukosha nhetembo dzeGenereration ye27, yemabhuku edu eSpanish uye nhasi tinoda kumurangarira uye kumubhadhara mutero mudiki.
Kana iwe usingazive zvishoma nezve hupenyu uye basa remunyori wechiSpanish, nhasi ndiyo nguva. Tevere, isu tichapfupikisa akanyanya kukosha manotsi eiyo hupenyu uye basa raVicente Aleixandre.
Vicente Aleixandre akaberekerwa muSeville Pakati pechirimo, musi waApril 26, 1898, kunyangwe hazvo hudiki hwake hwaizoshandiswa muMalaga, kuti aende kuMadrid. Vanoti ndihwo hutano hwake husina kusimba hwakaratidza kuti munyori uyu akazvipira chose kunhetembo. Munguva yeHondo Yenyika uye mushure meizvi, akaramba ari kuSpain, nekudaro achive mudzidzisi wevanyanduri vatsva avo vaibuda.
Chigadzirwa chake chedetembo chinogona kukamurwa muzvikamu zvitatu zvikuru:
La primera Inotangira Hondo yeVanhu uye inoratidzirwa nechishuwo chekutaurirana nekusanganiswa nemasikirwo Anonzwa kuti anofanira kubatana nepasi uye nezvirimwa nemhuka zvinogara mairi, achisiya parutivi chokwadi cheicho chemunhu. Izvi zvinokodzera, pamwe, pakunzwa kwake kushaya simba uye kushaya simba, umo maakazviwana ave akaderera kune vamwe vakaramba vachionekwa kutambura zvake kunzwa kukuru. Panguva ino painobudiswa "Mapfumo semiromo" (1932) uye "Kuparadza kana rudo" (1935). Mundima dzake, kunzwa kwerudo uye kufa zvakabatana zvakanyanya: rudo rwunotorwa sechimwe chinhu chakasimba uye chakanaka chinoparadza maonero emunhu.
In the segunda nhanho, yatove mushure meHondo Yenyika, isu tinowana iyo Vicente Aleixandre inotsigira zvakanyanya nemabasa akadai se "Mumvuri weParadhiso" (1944) kana «Nhoroondo yemoyo» (1954).
Mairi chetatu uye yekupedzisira nhanho zvese nhetembo uye zvakakosha, tinowana iyo "Nhetembo dzekuguma" y "Nhaurirano dzezivo" (1974), umo munyori anoziva nezvekukwegura kwake uye pachezvake anosangana nepfungwa yerufu.
Mugore 1977, Vicente Aleixandre akagamuchira iyo Mubayiro weNobel muMabhuku uye zvakaitikawo nhengo yeRoyal Academy yeMutauro.
3 nhetembo naVicente Aleixandre
Tevere, tinokusiya uine nhetembo nhatu nemunyori mukuru wechiSpanish uyu:
kukupa iwe hope mazwi,
kana kuwaridza chifananidzo nemiromo yangu
pahuma yako, kwete kunyange nekutsvoda kwangu.
Zano remunwe wako
nembambo yepingi, yechiratidzo changu
Ndinotora, uye, mumhepo yakagadzirwa,
Kubva pamutsago wako, nyasha uye mhango.
Uye kudziya kwemaziso ako, mutorwa.
Uye mwenje wemazamu ako
Kufanana nemwedzi muchirimo
inotipa moto weyellow. Uye yakamanikana
inoita kunge ichiyerera ichidzoka kwauri ichibva kwandiri.
Hazvisi izvo. Hazvizove. Zvaunoreva zvechokwadi
vamwe vese vakatondipa,
iyo inonakidza dimple,
Hausi mugumo wako semukombe usina maturo
kuti unofanira kukurumidza. Donhedza ngowani, uye ufe.
Ndokusaka iwe uchisimudza zvishoma nezvishoma muruoko rwako
kupenya kana kutaurwa kwaro, uye minwe yako ichipisa,
kunge chando chando.
Aripo uye anga asipo, asi aive uye akanyarara.
Iyo inotonhora inopisa uye mumaziso ako iyo inozvarwa
ndangariro dzake. Kurangarira kunonyadzisa
worse: zvinosuwisa. Kukanganwa kufa.
Nekuremekedza akafa. Mumvuri wake unoyambuka.
Uri kuenda kupi, tarisa?
Kumadziro machena aya
Masvingo, siringi, pasi:
chikamu chakasimba chenguva.
Yakavharwa maari, muviri wangu.
Muviri wangu, hupenyu, mutete.
Vachadonha rimwe zuva
miganhu. Mwari sei
chiedza. Mufaro mufaro!
Asi ivo vanozovharwa
madziro. Kune satin,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Pazuva rakaita nhasi Vicente Aleixandre akashaya